ဗိုလ်ထက်မင်း | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 6
ဗိုလ်ထက်မင်း – တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အာဏာရှင်လို့ ဆိုရမတဲ့လား – အပိုင်း ၂
ဗိုလ်ထက်မင်း – လမ်းခုလတ် ၂၀၁၇၊ အမျိုးသားရင်ကြား ကွဲအက်ရေးဆီသို့လား (၃)
ဗိုလ်ထက်မင်း - စိန်ခေါ်မှူတွေရှိနေတဲ့ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးတိုက်တွန်းချက် - အပိုင်း (၃)
ဗိုလ်ထက်မင်း - NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့အရေး၊ အသွင်မတူတဲ့ အမြင်များ ကောက်နုတ်ကြည့်ခြင်း - အပိုင်း(၁)
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? – ၃
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? – ၃ (မိုးမခ) ဧပြီ ၇၊ ၂၀၁၅ ၁။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိူင်ဟာ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်ပြီးနောက် တပ်မတော် ကြည်း၊ရေ၊လေ...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? – ၂
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်းနေရတာလဲ? – ၂ (မိုးမခ) ဧပြီ ၅၊ ၂၀၁၅ ၁။ တပ်မတော်ကို အရည်အသွေးရှိရှိ အဆင့်အတန်းမြှင့်မြှင့် Standard...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်း နေရတာလဲ ?
ဗိုလ်ထက်မင်း – ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးရင် တပ်မတော်သားများကို ဘာကြောင့် အဓမ္မ စစ်တိုက်ခိုင်း နေရတာလဲ ? (မိုးမခ) ဧပြီ ၃၊ ၂၀၁၅ ၁။ တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ်(မူကြမ်း) (nationwide ceasefire agreement)...
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဥပဒေကိုင်စွဲ ဘက်မလိုက် ရင့်ကျက်မှု လက္ခဏာတွေဆိုတာ ဘာလဲ … ဘယ်လဲ … (၃) နိဂုံး (မိုးမခ) မတ်လ ၂၄၊ ၂၀၁၅ တပ်ချုပ်ရာထူး ၂၀၁၀ခုနှစ်...
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဥပဒေကိုင်စွဲ ဘက်မလိုက် ရင့်ကျက်မှု လက္ခဏာတွေဆိုတာ ဘာလဲ … ဘယ်လဲ … (၂)
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဥပဒေကိုင်စွဲ ဘက်မလိုက် ရင့်ကျက်မှု လက္ခဏာတွေဆိုတာ ဘာလဲ … ဘယ်လဲ … (၂) (မိုးမခ) မတ်လ ၂၁၊ ၂၀၁၅ (၁) တပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်စတင်ဖြစ်တာနဲ့...
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဥပဒေကိုင်စွဲ ဘက်မလိုက် ရင့်ကျက်မှု လက္ခဏာတွေဆိုတာ ဘာလဲ … ဘယ်လဲ …
ဗိုလ်ထက်မင်း – တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဥပဒေကိုင်စွဲ ဘက်မလိုက် ရင့်ကျက်မှု လက္ခဏာတွေဆိုတာ ဘာလဲ … ဘယ်လဲ … (မိုးမခ) မတ်လ ၁၈၊ ၂၀၁၅ တပ်မတော်မှာ ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒ၊ ကာကွယ်ရေးဌာန ကောင်စီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊...
ဗိုလ်ထက်မင်း – Standard Army အိပ်မက်မှ ရုတ်တရက်နိုးထလာခြင်း (အပိုင်း-၃)
ဗိုလ်ထက်မင်း – Standard Army အိပ်မက်မှ ရုတ်တရက်နိုးထလာခြင်း (အပိုင်း-၃) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၅ လောက်ကိုင်တိုက်ပွဲ ဖြစ်ဖြစ်ခြင်း မကြေညာနိုင်တာကို နားလည်ပေမဲ့ ၂၄ နာရီကျော်တဲ့အထိ ဘာကြောင့် မကြေညာဖြစ်တာကို...
ဗိုလ်ထက်မင်း – Standard Army အိပ်မက်မှ ရုတ်တရက်နိုးထလာခြင်း (အပိုင်း-၂)
ဗိုလ်ထက်မင်း – Standard Army အိပ်မက်မှ ရုတ်တရက်နိုးထလာခြင်း (အပိုင်း-၂) (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၅ ယခင်ဒုဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး မောင်အေးက ကိုမြင့်ဆွေကို (ယခု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်) “ထောက်လှမ်းရေးပြန်ဖွဲ့ရင် ထောက်လှမ်းရေးဆိုတဲ့ အသံတောင်...
ဗိုလ်ထက်မင်း – Standard Army အိပ်မက်မှ ရုတ်တရက်နိုးထလာခြင်း (သုံးသပ်ချက်) အပိုင်း-၁
ဓာတ်ပုံ (ရိုက်တာ)၊ ကိုးကန့် ဗိုလ်ထက်မင်း – Standard Army အိပ်မက်မှ ရုတ်တရက်နိုးထလာခြင်း (သုံးသပ်ချက်) အပိုင်း-၁ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၅ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်ိလှိုင်ဟာ တပ်မတော်ကို Standard...